मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. राम केवल साह
On: २०७७ माघ १८ गते, आईतवार, ०७:४५ बजे प्रकाशित
बटुकनाथ झा, धनुषा। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छन। मुख्यमन्त्री कुलपति रहने प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपतिमा डा. राम केवल साह, रजिष्ट्रारमा डा. विनोद यादव र रेक्टरमा डा. अंकुर साहलाई नियुक्त गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री निवास मधेश भवनमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण पछि सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशकै गौरवको योजनाको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्ति सरकारका लागि गौरवका दिनको रुपमा रहेको बताए।
नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको लागी अवसर र चुनौती दुबै रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यसै वर्ष देखी एकेडेमिक सेसनहरू सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको छ।
कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, मुख्य महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा सहितको उपस्थिति रहेको थियो।
अन्य सम्बन्धित समाचार: महोत्तरीमा १० दिन थपियाे निषेधाज्ञा
२०७७ माघ १८ गते, आईतवार, ०७:४५ बजे प्रकाशित